‘अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जेनयुन टेम्पोररी इन्ट्यान्ट (जीटीई) हो’ |
30 May 2020 | शनिबार, १७ जेष्ठ, २०७७
अन्तवार्ता बुधबार, २९ भदौ, २०७३
एइसीसी ग्लोबल अष्ट्रेलियन अन्तर्राष्ट्रिय एजुकेशन कन्सल्ट्यान्सी हो । भिसा प्रोसेसिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको यो कम्पनीले काठमाडौंबाट समेत आफ्नो सेवा दिदैं आएको छ । यसबाहेक पोखरामा पनि एइसीसीले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । अष्ट्रेलियाले हालै स्ट्रीमलाइन भिसा प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्दै सिम्पलिफाइड स्टुडेण्ट भिसा फ्रेमवक लागु गरेको छ । कतिपयले यसलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण भनेका छन् । एइसीसी ग्लोबल काठमाडौंका एसिष्टेन्ट म्यानेजर शैलेशकुमार झासँग एजुकेशन समाचारले अष्ट्रेलियाको भिसा प्रक्रिया, खर्च, एइसीसी ग्लोलब, यसका सेवाहरुलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीः
एइसीसीए ग्लोबलले सतप्रतिशत भिसा सक्सेस भन्ने गरेको छ । कसरी सम्भव छ ?
पहिलो कुरा कुनै पनि भिसा हन्र्डेन्ड प्रतिशत भन्न मिल्दैंन । मानवको मृत्युबोह कुनै कुरा सतप्रशित हुन सक्दैंन । तर, हाम्रो भिसा सक्सेस ९५ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
यति धेरै प्रतिशत भिसा सफल हुनुको कारण के हो ?
एइसीसी ग्लोलब विगत ८ वर्षदेखि यो सेवामा लागिरहेको छ । हामी ८ वर्ष लामो समयमा विभिन्न देशहरुका लागि भिसा प्रोसेसिङ गरिरहेका छौं । वल्र्डवाइड अप्रेशन र त्यसमा हासिल गरेको विशेषज्ञताको आधारमा हामीले यो सफलता हात पारेका हौं । त्यो बाहेक हामीले दिएको उत्कृष्ट सर्विस पनि कारण हो ।
जसरी हामीले विद्यार्थीहरुलाई काउन्सिलिङ गर्छौ । भिसा सर्विसेज दिन्छौं । विद्यार्थीमा आइएल्ट्स, उसका सर्कमस्टयान्सेजहरुबाट हामीले भिसा डेस्टिनीहरु निर्धारण गर्छौ । उनीहरुको कुन देशमा, के का लागि भिसा प्रोसेस गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसबारेमा उचित सुझावहरु दिन्छौं । अर्थात हामी स्टुडेन्टको प्रोफाइल बुझ्छौं । एकडेमिकले मात्र हुँदैंन्, उनीहरुको फाइनान्सियल सर्कमस्टेन्सेजले मात्र हुँदैन्, आइएलटिएसले मात्र हुँदैन्, पहिलेका भिसाहरुले मात्र पनि हुँदैंन । ओभरअल प्रोफाइलका आधारमा मात्र हामीले कुन देशका लागि भिसा आवेदन दिने भन्ने सुझाव दिन्छौं । त्यसपछि मात्र भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।
कुन—कुन देशका लागि भिसा प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ ?
अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका र क्यानडाका लागि भिसा प्रोसेसिङ गर्छौ । हामी विश्वका विभिन्न लोकेशनबाट अप्रेसनमा छौं । हाम्रो हेक्डक्वार्टर मेलबर्न हो । हामी सिड्नी र ब्रिसबेनबाट पनि अप्रेशनमा छौं । यसबाहेक भारत, नेपाल फिलिपिन्स, ग्रीसबाट पनि हामीले सेवा दिइरहेका छौं । निकट भविष्यमा हामी भियतनाम र चीनबाट समेत सेवा दिन खोजिरहेका छौं ।
अष्ट्रेलियाले हालै स्ट्रीमलाइनलाई विस्थापन सिम्पलिफाइड स्टुडेण्ट भिसा फ्रेमवर्क (एसएसभीएफ) ल्यायो । यसले के विद्यार्थीहरुलाई सहज भएको हो ?
सजिलो त नभनौं । तर, एसएसभीएफ अष्ट्रेलियन सरकारले नयाँ भिसा नियम ल्याएको छ । अष्ट्रेलियाले आफ्ना ग्राहक र त्यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीलाई कुनै—कुनै तरिकाले आकर्षण गरेको हुन्छ । तर, उसको बटमलाइनमा कुनै फेरबदल भएको हुँदैंन । उसको भिसाको बटमलाइन भनेको जेनयुन टेम्पोररी इन्ट्यान्ट (जीटीई) हो । जेनयुन विद्यार्थीलाई मात्र भिसा दिने कुरामा खासै परिवर्तन गरेको छैन । तर, एसएसभीएफमा यदि विद्यार्थी जेनयुन छ भने त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई ७५ प्रतिशत एक महिनाभित्रै भिसा दिने कुरा गरेको छ । हामीले भिसाहरु ३ देखि ४ सातामा पनि पाइरहेका छौं । केही केशहरुमा ढिलो पनि हुन्छ । तर, अधिकांश ४ देखि ६ हप्तामा भिसा डिसिजनहरु भइसक्छ ।
पछिल्लो नियमअनुसार इमिग्रेशनले लचिलो भएर युनिभर्सिटीहरुलाई बढी अधिकार दिएको सुनिन्छ नि ?
जीटीई (जेनयुन टेम्पोररी इन्टेन्ट) पूरा गर्ने लाई मात्रै युनिभर्सिटी र कलेजहरुले अफर लेटर दिइरहेको छ । यदि विद्यार्थीले जीटीई पूरा गरेको छ भने अफर लेटरमात्र होइन्, कन्फर्मेशन युनिभर्सिटीका आफ्ना रुलअनुसार चेक गरेपछि सिई गर्छ । केही युनिभर्सिटीले अन्तर्वार्ता र केहीले फाइनान्सियल डकुमेण्ट हेरेर सिओइ (कन्फर्मेशन इन्रोलमेन्ट एप्रुभल) दिन्छ र स्टुडेन्टले टयुशन फि पठाएपछि सिओइ पाउने र त्यसपछि डकुमेण्टका आधारमा भिसा अप्लाइ गर्ने गरिन्छ ।
अष्ट्रेलिया जानका लागि कुन विषय बढी उपयुक्त छन् ?
आधारभूत रुपमा एकिनका साथ त भन्न मिल्दैंन । तर पनि सबैभन्दा धेरै जाने एकाउन्टिङ, नर्सिङ, इनिजनियरिङजस्ता विषयमा बढी गइरहेका छन् । खासगरी, विजनेश र कमर्सका विद्यार्थीहरु धेरै जाने गरेका छन् । म यो फिल्डमा लागेको १६ वर्ष भयो । यो अवधिमा मैले यही ट्रेन्ड देखेको छु । सबभन्दा धेरै विजनेश एकाउटिङ, त्यसपछि आइटी इन्जिनियरिड विषयमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया गइरहेका छन् ।
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसा अप्लाई गर्दा त्यसको मापदण्ड के के हुनुपर्छ ?
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विद्यार्थीको प्रोफाइल हो । हामीले प्रोफाइल एनालाइसिसमा सबैभन्दा धेरै विश्वास गर्छौ । हामी सबै विद्यार्थीहरुका लागि भिसा आवेदन गर्दैनौं । प्रोफाइल एनालाइसिस भन्नुको मतलब हो उसको एकेडेमीक, विद्यमान अवस्थामा उनी के गरिहेका छन्, उनको भाषा कस्तो हो । जस्तो आइएल्ट, टोफल जिआर त्यो हेर्छौ । एकेडेमिक कति प्रतिशत मार्क छ ? एकेडेमीक ग्याप छ कि छैन ? पूरानो भिसा स्टाटस के छ ? यसबाहेक स्टुडेण्ड कहाँ जान खोजेको र के गर्न खोजेको छ त्यसको ओभरअल मोटिभेसन पनि हेर्छौ । हामी ओभरअल प्रोफाइल एनालाइसिस गरेपछि मात्र भर्ना लिन्छौं । हामीलाई जेनयुन स्टुडेण्ड चाहिएको छ त्यसैले सबैलाई भर्ना लिदैनौं ।
स्टुडेण्ड, अभिभावक र हाम्रो कम्पनीको जुन छवि छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नका लागि हामी सबै कुरा हेरेर मात्र एडमिसन गर्छौ । त्यसपछि मात्र भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।
अष्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि कति पैसा खर्चिनुपर्छ ?
त्यसमा पनि स्टुण्डेन्टको कोर्स, उसको ग्याप र ओभरअल प्रोरफाइलले काम गर्छ ।
अनुमाति रुपमा कति खर्च लाग्छ ?
अष्ट्रेलियामा १६ हजार अष्ट्रेलियन डलरदेखि ३८ हजार डलरसम्म फि छ । तर, खर्च स्टुडेण्डको बजेट के छ, एकेडेमिक के छ, इङ्लिस प्रोफेसेन्सी के छ र कुन कलेज र युनिभर्सिटीमा एडमिसन गर्ने क्षमता राख्छन् त्यही आधारमा तय हुन्छ । मोटामोटी अनुमानित विद्यार्थीले नेपाली १२ लाखदेखि ३६ लाखसम्म टयुशन फिमा भर्ना गर्न पाउँछन् । त्यो पनि यदि एकेडेमिकल्ली क्वालिफाइ र जेनयुन छन् भने ।
यसबाहेक डिपेन्डेन्टमा जानेहरुका लागि के अावश्यक पर्छ ?
डिपेन्डेन्ट भिसामा जनरल्ली हामीले श्रीमान/श्रीमती दुवैजना बराबर एकेडेमिक छन् कि छैनन् भनेर हेर्छौै । सक्दो ब्याचलर डिग्रीबाट मात्र हामी डिपडेण्ट केस लिन्छौं । यस्तो श्रीमान पनि ब्याचलर र श्रीमती पनि ब्याचलर हुँदा भिसा लाग्ने सम्भावना धेरै उच्च हुन्छ । न्युजिल्याण्डमा स्टुण्डेन्ट भिसामा सँगै जानै पाइदैंन । पहिले स्टुडेन्ट उड्नुपर्छ, त्यसको ८÷१० महिनापछि मात्र डिपडेन्ट उडन पाउँछ । त्यसैले विद्यार्थीहरु डिपेन्डेन्टमा जान चाहेको देशको इमिग्रेशन पोलिसी पनि हेरेर मात्र भिसा अप्लाइ गर्छौ ।
एइसीसी ग्लोबलले छात्रवृत्ति खोजिदिन विद्यार्थीका लागि कत्तिको पहल गर्छ ?
डिजर्भिङ र हाइल्ली मेरिटियस स्टुडेण्टहरुले छात्रवृत्ति पाउने हो । हाइली मेरिटियस भनेको ७५ प्रतिशतभन्दा माथि अंक ल्याउने विद्यार्थीहरु हुन् । यदि युनिभर्सिटीसँग फण्ड छ, विद्यार्थी क्वालिफाइड छ भने विद्यार्थीको अफर एसेप्ट ग¥यो भने छात्रवृत्ति पाउने हो । तर, सामान्यतयाः सबै विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति छैन् । एइसीसीसँग धेरै राम्रा विश्वविद्यालयहरु छन् । मेहनेती र जेहेन्दार विद्यार्थी जोसँग ७५ प्रतिशतभन्दा माथि छ (केहीले ७० प्रतिशतमा पनि छात्रवृत्ति दिइरहेका छन्) अन्डरग्राजुयट र माष्टर्समा त्यस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिलाउन सक्छौं ।
अष्ट्रेलियामा कति युनिभर्सिटीसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी मोटामोटी २६ देखि २८ युनिभर्सिटीसँग काम गर्छौ । अष्ट्रेलियामा ४३ युनिभर्सिटी छन् । हामीले काम गर्ने २६ देखि २८ युनिभर्सिटीमध्ये ८ देखि १० युनिभर्सिटीमा स्कलरसीपमा विद्यार्थीलाई सघाउ पु¥याइरहेका छन् । यदि स्टुडेण्ड डिजर्भिङ र क्वालिफाइड छ भने स्कलरसीप दिलाइरहेका छौं । हाम्रा कतिपय विद्यार्थीहरुले ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशत स्कलरसीप पाएर अष्ट्रेलिया गएका छन् ।
एइसीसी ग्लोबलले भिसा प्रोसेसिङबाहेक अरु के—के काम गरिरहेको छ ?
हामी अष्ट्रेलियन कम्पनी हौ, त्यसैले बजारमा अष्ट्रेलियामा पठाउने जुन होड देखिएको छ, त्यसमा हामी छैनौ । हामीले अष्ट्रेलिया भिसा प्रोसेस के हो ? के डकुमेण्ट चाहिन्छ? के सपोटिङ डकुमेण्ट चाहिन्छ ? यसबाहेक अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटीसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्छौ । वर्षमा २ देखि ३ मुख्य इभेन्ट गर्छौ जहाँ अष्ट्रेलिया, त्यहाँको शिक्षा, भर्ना पाउने अवस्थाबारे विद्यार्थी र अभिभावकले चाहेको जानकारी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधीबाटै लिन सक्छन् । हामीले यस्ता विभिन्न गतिविधी गरिरहेका हुन्छौं ।